Usuku My Pet » Ukuthi yilowo nalowo Gwema on the Usuku Lokuqala
Ukuthi yilowo nalowo Gwema on the Usuku Lokuqala
Igcine ukubuyekezwa: -nov. 20 2020 | 4 imiz ufunde
nezinsuku Okokuqala kungaba scary kokubili amadoda nabesifazane, ikakhulukazi uma kuziwa ekwenzeni ukuthi isithombe esihle kothile. Ngenkathi usuku lwakho lokuqala cishe sizoya ngaphandle kwezihibe, kukhona ezinye izinto, kube yilowo nalowo kufanele bayigweme lapho ethatha owesifazane ukuze banikezwe usuku lokuvela lokuqala.
Musa Ever Bonisa Up Late
Ukugcina ukuze banikezwe usuku lokuvela lokuqala kuyinto okumelwe nakanjani uyenze. Ukubonisa kusesimweni sekwephuzile uyonika usuku lwakho umqondo ongeyiwo. Yena bangase babe nomuzwa wokuthi wena njalo wokungasigcini, ukuthi abanandaba ngokwanele ngaye ukukhombisa up on isikhathi, noma, uze ufika, ingase icabange liye wasukuma. Noma kunjalo, nakanjani wafaka wakhe ucasukile futhi angase anikeze inothi omuncu ekuqaleni usuku lwakho. Uma une ukukhombisa kuze kuhlwe ngenxa amabutho kwamandla akho, uqiniseke shayela usuku lwakho qhashisa wo azi noma, uma omunye kini ayinayo umakhalekhukhwini, shayela yokudlela noma umhlangano endaweni ukuze bakwazi qhashisa wo azi.
Musa Bonisa Up singcolile futhi Dirty
Kubalulekile ukuba uzinike isikhathi esanele ngaphambi kosuku iqalele up futhi ubukeke nakahle. Uma lingaveli ngosuku looking shaggy kuqala, unkept, futhi kamnandi funky, usuku lwakho ngeke abe nombono oyiphutha ngawe. Usuku bangase bacabange ubheka ngale ndlela ngaso sonke isikhathi futhi ngokushesha izovalwa. Zinike isikhathi esiningi hlambi, phuca, noku-ayina yakho. Lokho isigamu sehora extra kungaba isikhathi esidingekayo ukuze wena onqenqemeni ezikhangayo usuku lwakho iye ngifuna, futhi ukhumbule, ngingabazi isikhathi ukugeza up for a date kungaba yingozi umphumela wayo. A waqeqesha kahle indoda eyayigqoke ngesizotha uyosibonisa phezu a slob stinky ngaso sonke isikhathi.
Musa Hlola Out Umphumela Abesifazane phambi kwakhe
Uma uya ngosuku nowesifazane, uye wenza ngokwakho kuye esingashintshi kuze kufinyelelwe esikhathini usuku. Ngenxa yalokhu, it is ngokuphelele out of line ukuba usuhamba nabanye besifazane ngenkathi wena ngosuku. Lokhu kubonisa ukuba luhlaza futhi engamukeleki. Ilokhu ukuphazanyiswa ezinye wesifazane nihamba cishe ukwenza usuku lwakho bengalondekile futhi ngokuqinisekile bengavumi ukukunika yena umuzwa wokuthi uyamthanda. Uma njalo ngifuna phezu kwehlombe lakhe ngesikhathi blonde hot etafuleni olandelayo, enye yezinto ezimbili cishe nakanjani yenzeke: 1) Idethi kabi kakhulu ngaye ngokwakhe, engacabangi ukuthi alithandeki noma engadingeki, noma 2) Idethi sicasuka ngokwedlulele futhi acasuke nawe, okuletha ngemoto embi ekhaya futhi ithuba sancipha ngosuku lwesibili.
Lapho ngosuku lokuqala, ungase uzizwe isidingo ezaziyenzile ukuze zikhange abantu intombazane yakho nge izindaba kanye izinsalela zokudla ezithakazelisayo ngawe. Kuhle lokho, kodwa musa ukweqisa. Khumbula ingxoxo phakathi kwabantu ababili, akakhohlwa ngisho nome munye umuntfu ukukhuluma kwenye. Kuwumqondo enkulu ukwabelana ezinye izindaba ezithakazelisayo futhi imicabango nge date yakho, kodwa uqiniseke ukuthi ukuyipha ngokuqondile isikhathi sakhe ngokwanele ukuba ngokulinganayo iqhaza engxoxweni. Buza imibuzo yakhe ngaye, lokhu kuzokwenza ibonise ukuthi unesithakazelo ngaye ungumuntu onjani futhi uzokunika ithuba lokufunda okunengi ngaye.
Musa Nswininiza futhi Khalaza
Yebo, siye sonke kwadingeka izinsuku zethu ezimbi, kodwa usuku (ikakhulukazi usuku lokuqala) akuyona indawo ukuba baveze zonke izikhalo zakho. Kungenzeka, usuku lwakho ulindele ukuba abe omuhle, isikhathi fun lapho ehlangana nawe. Nangabe wabingelela a 'Gosh izimoto a painÖI enjalo hate le townî liyoshiswa ngokushesha izovalwa. Ukukhononda lishona ithoni for ocindezelayo, usuku hlale ngingajabule. Ngisho noma uke waba usuku kubalwa, ungachithi ebusuku asemikhumbini ngakho. Vele uyojabula ukuba uchithe isikhathi nabo owesifazane unesithakazelo. Smiles abanaso kodwa kunjalo frowns. Kungakhathaliseki bayazi noma cha, kwemizwa yakho embi zingathinta usuku lwakho futhi ukuthi uzizwa kanjani ngawe. Ufuna usuku lwakho ukukhumbula kuwe njengoba funny and abeneme, hhayi Downer.
Ungabi Too Emzimbeni Bukhali
Kubalulekile kakhulu ukufunda ibe amaza usuku lwakho ekunika ngaphambi kokuya e for a kiss (noma ngaphezulu). Musa ngokuzenzakalela bacabanga ukuthi ngenxa yokuthi nje kwake usuku omuhle ukuthi usuku lwakho lumi ngomumo ukuthatha ubuhlobo bakho ngokomzimba ezingeni elilandelayo. Uma unesithakazelo kissing usuku lwakho, bathoma ngokurarulula ngesandla eliyifa, wanganga, futhi kancane ukwakha a kiss. Ngaso sonke isikhathi bahloniphe izifiso usuku lwakho. Uma uthi cha kunoma yisiphi ekuqhubekiseleni ngokomzimba, thatha yasabela ubuso value futhi uyekelele. Umuntu nolaka futhi uma kuziwa ukusondelana ongasibuyisela owesifazane off futhi kungenzeka ukuthi empeleni wenze owesifazane esabe noma okusikhathazayo.
Musa ukumtshela Uzoba Call bakhe, uma nenza bengazimisele
Ukukhuluma owesifazane 'Mina ngizobe ukubiza youî uma ungenawo uhlose ukwenza kanjalo kubi. Uma Lo wesifazane waba nesithakazelo in a date yesibili nawe, osizini lwakhe kuyomane Malibe likhulu uma yena ulindela azungeza call yakho kuphela ukuze ufunde ukuthi awukaze kwadingeka bengahlosile ebiza ukuze banikezwe usuku lokuvela yesibili. Uma ungafuni ukuba bamthinte, nje ngizibulale usuku ethi 'Kwakuwumhlangano nice wena noma elula' Sala kuhle, ukuphumula nice we eveningî. Le ndlela kungukuthi ngihola umfelokazi ku noma ekutholeni okulindelwe kuye phezulu. On inothi reverse, uma ungafuni ukuba ukuhlela usuku lwesibili, qiniseka ukuthi qhashisa wo azi.
Ukuhlelela nezinsuku zokuqala kungaba nerve-wracking, kodwa ngokulandela imihlahlandlela elula ngenkathi usuku ezoqinisekisa usuku best okunokwenzeka. Uma kukhona nobungane, ngesikhathi, enenhlonipho, futhi anake, amathuba wena kanye usuku lwakho ngeke abe nesikhathi esikhulu futhi, uma ukukhangana mutual, usuku lwakho lokuqala kungaba isiqalo sobuhlobo enhle.
5 Izindlela Thola Love of Life Your!